April 2014 ~ Thinksphere
तुहिएको सपनाको कुनै गन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? धेरैले सपाट उत्तर दिनेछन्, सपनाको कुनै गन्ध हुँदैन । कसैलाई लाग्न सक्छ यो प्रश्न आफैंमा सिजोपनिक छ ।
कम्तीमा ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा किताब र कफीलाई दिने सुबिस्ता सबैलाई पुगोस् भन्नका लागि मसँग नेपाली र अंग्रेजी दुईटा भाषा छन् । शासकहरूसँग कति नाले बन्दुक छन् ?
5:04 AM Essays, Political Commentaries No comments
विद्वान् एलएस बरालले पञ्चायतकालीन मन्त्रीहरूको प्राज्ञिक अध्ययन गरेर 'द नेपाली मिनस्टि्रयल एलिट सिन्स १९६० : चेन्ज एन्ड कन्टिन्युटी अफ द पोलिटिकल एलिट' शीर्षकको आलेख तयार पारेका रहेछन्। त्यसमा उनले पञ्चायती मन्त्रीहरूका बारे यसो भनेका छन्, 'परविर्तन पक्षधरका विरुद्धको लडाइँमा पहिलो दस्तामा उभिएका नयाँ वर्गका मानिस हुन् यी।' उनले व्याख्या गरेका ती पञ्चायतकालीन एलिट मन्त्रीहरू र हालका मन्त्रीका चरत्रिबीच खासै भिन्नता लाग्दैन। समाज त पुँजीवादी बन्यो, समाजका अगुवाको चरत्रि र सोच्ने ढंगमा भने त्यो आधारभूत परविर्तनको अत्यन्त न्यून प्रभाव छ। त्यसैले यहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको एसएसपी रमेश खरेलविरुद्धको अभिव्यक्तिको सामान्य परीक्षण गर्न लागिएको छ।
गृहमन्त्री गौतम ठाडो बोल्छन्। आफ्नो असली चरत्रि छोप्ने गरी गुलिया शब्दजाल रच्ने उनको स्वभाव छैन। उनले प्रयोग गर्ने भाषामा उनको समग्र व्यक्तित्वको तस्बिर खिच्न सकिन्छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल चाकरी बजाउन उनको दैलोमा नपुगेकामा उनले देखाएको रोष उनको वास्तविक व्यक्तित्व हो। उनीबाट त्यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु भूल हो। तर, दुःखदचाहिँ के हो भने नेपाली राजनीतिका कुनै अप्रतिम पात्र होइनन् गौतम। अझ उनको पार्टीभित्र त उनी एक्ला हुँदै होइनन्। 'डायलेक्टिक मेटियरयिलिज्म' वा 'पोलिटिकल लिबरलिज्म' काखीमा च्यापेर हरदम धूप, दीप, नैवेद्यको ध्याउन्नमा लाग्नेहरूको जमात ठूलो छ त्यहाँ। फरक यत्ति हो, उनका समकक्षीहरू बोल्दा व्यक्त हुने सामन्ती आशयलाई उदारताको आवरण भिराउन जान्दछन्।
सी राइट मिल्सका अनुसार व्यक्तिको जीवनी र समाजको इतिहासका मिलनविन्दुहरू खोज्नु नै समाजशास्त्रीय चिन्तन गर्नु हो। युवा संघको भेलामा गौतमले खरेललाई गरेको गालीलाई उनको व्यक्तिगत जीवनीको एक चरत्रि मान्दै गर्दा त्यो सामाजिक इतिहाससँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सयौँ नेताहरूका बीचमा चिन्तनको त्यो स्तर भएका उनी एक्ला मानिस हुन्थे भने त्यो बिलकुल उनको व्यक्तिगत दुःख हुन्थ्यो। तर, सत्तासीन हुन पुगेका र सत्ताका आकांक्षी बनेर बसेका सयौँको साझा चरत्रि नै वामदेव-चरत्रि हो।
हाम्रो समाजमा निर्वाचन जितेर कुर्सीमा पुगेका हरेकले आफूलाई सानो वृत्तको 'पेट्रन' अर्थात् कृपादाता सम्झिन्छ। भोट माग्दासमेत उसले आफूलाई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गररिहेको हुँदैन। बरू उही उदार कृपादाता बन्ने नै वाचा गररिहेको हुन्छ। गत निर्वाचनअघि गरिएका लम्बेतान घरदैलो त्यही कृपालु महाराज हुने ध्याउन्न थियो। हरेक नागरकिलाई उसको पेट्रन बन्ने आश्वासन बाँडेर भोट मागिएको थियो। सोझा जनताले केको विश्वासमा मत दिए भन्न सकिन्न तर मध्यम वर्ग भनेर चिनाइने गरिएको चतुर सहरयिाहरूको रोजाइमा भने आफ्ना पेट्रन हुन सक्ने उम्मेदवार नै परेको थियो।
घरदैलोमा जाँदा हरेक उम्मेदवारले त्यही क्षेत्रका आफ्ना स्थानीय एजेन्टहरूलाई लिएर गएका हुन्छन्। ती एजेन्टहरूलाई उप वा सह पेट्रनका रूपमा मतदाताका अघिल्तिर पेस गरिएको हुन्छ। अर्थात् भोलि जागिर खोजिदिने, विदेश जान भिसा मिलाइदिने वा छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाइदिने अनेक खाले कृपा गर्न ती एजेन्टहरू उपयुक्त बिचौलिया हुने निक्र्योल गरेर एक भोट जोहो गरिएको हुन्छ। उम्मेदवारसँग सोझो चिनजान स्थापित गर्न सक्नेका लागि त उपपेट्रनको खाँचो पनि पर्दैन। त्यसैले मन्त्री वा तिनका पीएका मोबाइलमा हरदम छोरालाई जागिर वा छोरीलाई दाइजोका अनुरोधहरू अहोरात्र बजिरहन्छन्। पछिल्लो समय मन्त्रीका फोनका घन्टी सबभन्दा बढी बजाउने हुल्लडबाज गुन्डा, तस्कर र कथित डनहरू हुन्। निर्वाचनमा हुने करोडौँ खर्च यिनै तस्कर, कमिसनखोर र गुन्डाहरूका अवैध पैसा नै हो भन्ने कसैका अघि छिपेको छैन। अहिले सत्तासीनहरू सबभन्दा बढी यस्तै जमातका सुकिला पेट्रन भएका छन्।
निर्वाचनदेखि कुर्सीसम्मको सिलसिलामा त्यही पेट्रोनगिरीको एकरूपता देखिन्छ। कर्मचारीका सरुवा, बढुवालगायतका काम पनि उही कृपालु महाराजका रूपमा नै गर्ने हुन् मन्त्री र सांसदहरूले। यस्तो पृष्ठभूमिमा ठूलो यत्नपश्चात् गृहमन्त्री हत्याएका वामदेवले प्रहरी प्रमुखबाट चाकरी खोज्नु सामान्य हो। अहिलेसम्म खरेल उनलाई स्वस्ति गर्न नपुग्दा उनी रिसाउनु पनि सामान्य नै हुने भो।
कांग्रेस र एमालेबीच गृह मन्त्रालयका लागि रस्साकसी हुँदै गर्दा प्यूठानतिरका एक चिनारुसँग यो पंक्तिकारको भेट भएको थियो। त्यस क्रममा वामदेवबारेका प्रसंगहरू उनले सुनाएका थिए। वामदेवको किसान पृष्ठभूमिबारे उनी निकै जानकार रहेछन्। उहिल्यै गाउँमा उनले ऋण काढेर आफ्नो गर्जो टार्ने गरेको पनि उनले बताए। त्यसो त धेरै नेपाली वामपन्थी नेताहरू यही पृष्ठभूमिबाट उठेर आएका छन्। उनले ऋण लिने क्रममा कति जाली सामन्तहरूकहाँ तमसुक गरे हुनन् ! ती हरतिाल पोतेका तमसुकहरू उनले ऋण चुक्ता गरेपछि च्यातिए होलान्। तर, ऋण लिएर गर्जो टार्नुपर्ने अवस्थाबाट किसान आन्दोलन, माक्र्सवादको बाटो हुँदै दाइजो पेवा र हीरा-जवाहरातको तिजोरीसम्म आइपुग्दा वामदेवको मस्तिष्कबाट भने सामन्तवादको तमसुक च्यातिएको रहेनछ। वामपन्थी आन्दोलनमा लाग्नुअघि आफूलाई ऋण दिने त्यो आफन्तजस्तै सामन्त बन्छु भन्ने कुनै दिन उनले सपना देखेका थिए हुनन्। सम्भवतः उनको तमसुकमा भन्दा धेरै गाढा हरिताल उनले त्यस बेला देखेको सपनामा पोतिएको थियो। त्यो तमसुकजस्तै उनको सामन्त बन्ने सपना पनि च्यातिएनछ। लम्पट कर्मचारी र केही हुल्लडबाजको पेट्रन बनेर उनले त्यो सपना पूरा गरेका छन्।
नेपाली समाजको आर्थिक जग दलाल पुँजीवादी भएकामा धेरै विद्वान्हरू एकमत छन्। विद्यमान् आर्थिक लेनदेन र क्रियाकलाप हेर्दा त्यो विश्लेषणमा धेरै शंका गर्नुपर्दैन। त्यसो त एमाले वृत्तमा नेपाली समाज पुँजीवादी भएकामा लगभग सहमत हुने नेता वामदेव पनि हुन्। तर, बदलिएको आर्थिक परिस्थितिले उनको मस्तिष्कमा पोतिएको हरिताल राम्ररी उक्किएको रहेनछ। उनको पार्टीको दस्तावेजमा नेपाली समाज अर्धसामन्ती लेखिएको, उनी पुँजीवादी भएको विश्लेषणसँग सहमति जनाउँछन्। समग्र पार्टी हिँडेको नवउदारवादी र बाहुनवादी गोरेटो हिँड्छन् र कुर्सीमा बस्दा सानो वृत्तको कृपादाता हुन्छन्, बोल्दा भने आफूभित्रको सामन्त सग्लै प्रकट गर्छन्। विचित्रको जीवन बाँच्छन् कमरेड वामदेव गौतम। उनीजस्तै छन्, अरू धेरै कमरेडहरू जो आफूलाई तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्छन्।
सायद, यसैलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनिन्छ ।
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित (२०७० चैत ३०)
8:49 AM Political Commentaries No comments
पछिल्लो समय नेपाली पत्रिकाहरूमा लगातार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लामा अन्तर्वार्ताहरू छापिए । निर्वाचनपछि मौन बसेका उनलाई अहिले पत्रिकाका पृष्ठहरूमा मुखर देखिन थालेको छ । प्रायः अन्तर्वार्तामा एउटा प्रश्नचाहिँ दोहोरिएको छ: अबको संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेले आफ्नो अंकगणितको बलमा तपाईहरूलाई पेलेर आफू अनुकूलको संविधान निर्माण गरे भने के हुन्छ ? उनले सबैलाई एउटै उत्तर दिएका छन्: त्यसो गर्दा द्वन्द्व निम्तिन्छ ।
यस्तो आशयको प्रश्न दोहोरिनुको खास पृष्ठभूमि छ । गत संविधानसभा निर्वाचनअघि एमालेले अघिल्लो संविधानसभाको अंकगणितका कारण संविधान बन्न नसकेको बताएको थियो । माओवादी र मधेसवादीको शक्तिशाली उपस्थिति हुनु नै संविधान नबन्नुको मुख्य कारण हो भन्ने उसको जिकिर थियो । कांग्रेसले पनि यस्तै भाषा प्रयोग गरेको थियो । त्यसैले दोस्रो निर्वाचनमा अंकगणित मिलाइदिन तिनले जनतालाई अनुरोध गरे । तिनको अनुनयलाई मानौं नेपाली जनताले गुने र बुझे- कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी र एमालेलाई कांग्रेसकै हाराहारी दोस्रो बनाइदिए । अब एक वर्षमा संविधान बनिहाल्ने उनीहरूको जिकिरमा अंकगणितको अनुकूलता पनि स्पष्ट झल्किन्छ । साथै पहिलो संविधानसभाको गठनपछि कांग्रेस-एमालेका नेता र ती पार्टीनिकट बौद्धिकहरूबाट सिर्जित 'डिस्कोर्स' पनि यो प्रश्नको जग हो ।
अंकगणितको खेल बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । सत्ताको छिनाझप्टीमा एक-अर्काको कठालो समात्ने प्रतिद्वन्द्वी भए पनि संविधान निर्माणका सवालमा लगभग नजिकका दाजुभाइ नै हुन्, कांग्रेस र एमाले । उनीहरूको मिलाप हुनेमा शंका भएन । त्यसउपर समाजवादी भनिए पनि कांग्रेस बाहुनवादी 'ओरिएन्टेसन'बाट सिद्धि प्राप्त गरेको पार्टी हो भने एमालेको 'ककटेल माक्र्सवाद'का दुई मुख्य तत्त्व हुन्- महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र बाहुनवाद । यही पृष्ठभूमिका कारण यी दुई पार्टीका गठजोडमा राप्रपा नेपाल र अन्य दक्षिणपन्थी शक्ति पनि मिसिन आइपुग्ने नै छन् । त्यसैले संघीयताको रेखांकन गर्दा होस् वा सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दा- माओवादी, मधेसवादी र अन्य पहिचानवादीलाई ह्याकुलोले मिच्न त्यति गाह्रो छैन भन्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
अब पहिलो संविधानसभा गठनपश्चात मूलधारमा स्थापित केही डिस्कोर्सहरू हेरौं, जो यसपटक पनि दोहोरिने निश्चित छ । यी डिस्कोर्स निर्माण गर्ने केही जोदाहाहरू जमेर लागेकै छन् । पहिलो, पहिचानको आधारमा संघीयताको अवधारणा अघि सार्नु भनेको विखण्डन निम्त्याउनु हो । दोस्रो, मधेस वा अन्य जनजातिको मुक्तिको प्रश्नले वर्गीय आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नेछ, त्यसैले 'प्रगतिशील'हरूले यसको समर्थन गर्नु हुँदैन । तेस्रो, जनजाति र मधेसको मुद्दा मूलतः दाताकेन्दि्रत मुद्दा हुन् । चौथो, मधेसवादी, माओवादी र अन्य जनजाति पक्षधर पार्टीहरूले गरिब बाहुन-क्षत्रीको अधिकार अझ खुम्च्याउने प्रयत्न गर्दैछन् र यिनलाई अधिकार दिनु भनेको बाहुन-क्षत्रीलाई धकेलेर भित्तामा पुर्‍याउनु हो । माओवादीले सद्भावपूर्ण नेपाली समाजलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बिथोलेर धमिलो बनाइदियो । पाँचांै, मधेस भ्रष्टाचारको पर्यायवाची शब्द हो र मधेसी नेता सबै भारतका दलाल हुन् ।
पहिचान पक्षधरहरू पृथकतावादी हुन् भनेर पुष्टि गर्ने अनेक तर्कहरू गरियो । 'एक मधेस, एक प्रदेश' भन्ने नारा नै उनीहरूलाई त्यो पगरी गुथाउन काफी भयो । काठमाडौंका भित्तामा अखण्ड नेपालको नारा पोत्न थालियो । तर सत्य के हो भने पृथकताका लागि २१ दिने मधेस आन्दोलन भएको थिएन । कुनै हतियारधारी जत्थाले त्यस्तो हौवा फैल्याएका भए पनि मधेसीहरूमाझ तिनको कुनै पकड थिएन । ती राजनीतिक शक्ति बन्ने सम्भावना विलकुलै थिएन । तर नेपाली भाषाको बोलवाला कम गर्दै अन्य मातृभाषाहरूलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने मागलाई विखण्डनसँगै जोडियो । परमानन्द झाले हिन्दीमा सपथ लिएपछिको घट्नाक्रम यहाँ दोहोर्‍याइरहन जरुरी छैन ।
दौरा-सुरुवालमात्रै खाँटी नेपाली पोसाक होइन, बरु नेपालका अन्य समुदायले लगाउने वेशभूषा पनि उत्तिकै राष्ट्रिय र उत्तिकै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने बुझाउने प्रयत्न हुँदा दौरा-सुरुवाल लगाएर फेसबुकमा ठाँटिने लहर बढ्यो । वर्षौं अलगाव भोगेर क्षतविक्षत मनोविज्ञानमा बाँचेका मधेसीहरूलाई २०६३ सालमा पूरा भएको भनिएको 'पुँजीवादी क्रान्ति'पश्चात पनि चरम अविश्वास गरियो । यही अविश्वास वरिपरि भयंकर ठूला डिस्कोर्सको निर्माण भयो र प्रचार पनि उत्तिकै व्यापक गरियो ।
आफूलाई प्रगतिशील माक्र्सवादी भन्ने थुप्रै एमालेजन नेपाललाई विभेदपूर्ण समाज भन्न छोड्दैनन्, तर जात, लिंग र धर्मका आधारमा पनि विभेद छ भन्दा कम माक्र्सवादी भइन्छ भनेर डराउँछन् । माक्र्सले आफ्ना किताबमा सायद कतै पनि समावेशी शब्द उल्लेख नगरिदिएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो विमर्श गर्नु अपराध हो भन्ने भ्रम छ । त्यसैले जातिगत र अन्य विभेदका कारण नेपालीहरू अधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेरै उनीहरू बाँकी रहेको क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्छन् । सुदूर भविष्यमा एकदिन नेपाली समाज वर्गविहीन हुनेछ र त्यसबेला कुनै जात वा धर्म केही हुने छैन, त्यो भविष्यका खातिर पनि अहिले यो जात वा भाषाको विभेदलाई लिएर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने गफले आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्छन् । यस्तो विचित्रको माक्र्सवादको पृष्ठपोषक नबनेको भए अशोक राईलाई त्यत्रो लामो इतिहास भएको पार्टीको ठूलो पद छोडेर चुनाव जितिने कुनै सम्भावना नभएको अर्को संघीय समाजवादी पार्टी खोल्नुपर्ने सायद रुचि हुने थिएन ।
जनजातिका हकहितका लागि बोल्ने जोकोहीलाई विदेशी दाताहरूको इसारामा बोलेको आरोप लगाइयो । आरोप लगाउनेहरूमा दाताबाटै आएका दानापानी सेवन गर्नेहरूको बाहुल्य थियो । निश्चय नै सन् '९० पछि समावेशीकरणजस्ता मुद्दामा एनजीओहरूले दाताहरूको सहयोगमा कार्यक्रमहरू ल्याएका हुन् । तिनैले समावेशीसम्बन्धी थुप्रै 'लिटरेचर' पनि तयार गरेका हुन् । तर समाजमा विभेद र समस्याको कुनै धरातल नभई कुनै पनि मुद्दा दाताकै डलरका भरमा यति ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्दैन । जनजातिले भोगेका समस्या कसैको स्वैरकल्पना वा मनोगत षड्यन्त्रको जालो होइन । अर्को रोचक तथ्य के छ भने समावेशीजस्ता विषयहरू एनजीओका झोलीमा हुन्जेल त्यसका पछि लाग्ने धेरै सहरिया धनाढ्यहरू तिनै मुद्दालाई केही राजनीतिक दलले मूलधारमा ल्याएपछि भने हतास हुनथाले । तिनले मधेसीहरूलाई समेत दाताकै 'प्रोपोगन्डा'सँग जोडेर व्याख्या दिनथाले, जबकि केही वर्ष अघिसम्म दाताहरूका परिकल्पनामा कुनै मधेस भन्ने शब्द नै थिएन ।
केही पहिचान पक्षधरले स्वायत्त राज्य र अग्राधिकारको माग उठाएका थिए । चर्का नारा लिने त्यस्ता संगठनहरूको पकड भने उति बलियो थिएन । तर यतिकै आधारमा माओवादी लगायत अरु सबै संगठनहरूलाई विखण्डनकारी र गरिब बाहुन-क्षत्रीका दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्ने भयंकर ठूलो उद्यमको थालनी भयो । सडकमा चण्डी पाठ गर्ने जस्ता अनेक नाटकहरू मञ्चन गरियो । कुनै एक जातिको नामबाट संघको नामकरण गर्दामात्रै पनि अन्य जातिहरूलाई कुनै अधिकार नहुने जस्ता बेतुकका प्रसंग चियापसलहरूसम्म फैलाइयो । अल्पसंख्यकहरूको मुलुक भनेर चिनिएको नेपालको संविधानमा अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्नेमा कसैको दुईमत थिएन । अल्पमत जनसंख्या भएका जाति र समुदायको अधिकार सुरक्षित बनाउन चुनावी राजनीतिले समेत जुनसुकै राजनीतिक दललाई बाध्य पार्ने तथ्यलाई छोपियो । केही मधेसी नेताहरूका गलत कामको फेहरिस्त बनाएर उनीहरूको सिंगो मुद्दालाई 'डाइलुट' गर्ने ठूला कथानकहरू तयार पारिए । माओवादीलाई हत्याराहरूको जमात भनेर लाञ्छना लगाइयो । डिस्कोर्स निर्माता पण्डितहरू आजका दिनसम्म माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई चम्मलघाँटीका डाँकासरह व्याख्या गर्न लागिपरेका छन् ।
यिनै विषय वरिपरि रहेर लेख्ने, बोल्ने, प्रशिक्षण दिनेहरू सबै शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेकाहरू नै थिए । कलम उनीहरूको बलियो थियो, तरवार पनि उनीहरूकै धारिलो । सतहमा हेर्दा ठीकै देखिने- अधिकार, एकता, समानता र स्वतन्त्रताजस्ता शब्दाडम्बरको सुनौलो लेपन लगाएका खतरनाक डिस्कोर्स निर्माण गर्न र त्यसलाई सामान्य मानिसमा लाद्न उनीहरू सफल भए । यी सबलाई चिर्न माओवादी, मधेसवादी, अरु पहिचान पक्षधरले जति मिहिनेत गर्नुपथ्र्यो, त्यति गरेनन् । त्यसबेला उनीहरूका आ-आफ्नै साँघुरा स्वार्थहरू हावी भए । आफंैभित्रको लडाइँ उनीहरूलाई भारी भयो । फलतः चुनावमा डिस्कोर्स निर्माण गर्नेहरूकै पक्षमा पासा पल्टियो । संविधानसभामा उनीहरूकै अंकगणित सबल बन्यो ।
उही भाष्य, उही कथानकको पुनरावृत्ति अहिले पनि जारी छ । त्यसैले प्रचण्डलाई दोहोर्‍याएर पत्रकारहरू माथिको प्रश्न सोध्न बाध्य छन् । उनी द्वन्द्व निम्तिने खतरा औंल्याउँदै छन् । उनको तर्कलाई सत्ताधारी र डिस्कोर्स निर्माताहरूले कसरी बुझेका छन्, थाहा छैन । तर बेवास्ता गरिरहने र उस्तै क्रम पुनः दोहोर्‍याउने हो भने जातीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, 'एक मधेस एक प्रदेश'भन्दा उग्र नाराहरू उठ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।